AFAAN KEENAAN AFAAN KEENYAAF HAA KAANU -
Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee dursee barri 2014
kun bara nagaa fi bara badhaadhinaa, bara milkii gaarii fi bara tokkummaan
Oromoo sonaan jabaatu isiniif haa tahu! Ilaa, amma waayee mataduree kanaa
olitti kaayamee irrattan waa isiniif dhiyeessaa mee na hoofolchaa!
Duula dhuma bara dabree isa muummiyyeewwanii (iliitonnii) warra Amaaraa:
uummata Oromoo, saba Oromoo fi Biyya Oromoo irratti adeemsisan duradhaabannoo
fi ofirraa-qolannaan dhalawwan Oromoo alaa-manaa agarsiisan kan hedduu nama
Amma irraantii tokko tokkollee arganneeti jirra. Hubaddhaa nuti
Oromoonni biyya namaa deemnee: laga Abbayyaa, laga Barreessaa fi laga Bashiloo
ceenee biyya Habashaa qabannee, mirga warra Habashaa irra ijjanneetii mitii!
Isaan garuu biyya keenya humna qawwee fi humna gargaarsa Faranjiitiin
qabatanii: harma aayyolee cicciranii, harka aabbolee mummuranii, ijaa-funyaan
dargaggeeyyii fi shamarranii buqqifatanii, lafa lafee Oromoo sarbatanii,
gabbaarii fi gabra nu taasifatanii waggaalee hedduu qaxxaamuruun as gayani.
Kana hundaa kan jalqabee fiixaan-isaaniif baase, isa qaamaan namaa garaanimmoo
bineensaa san kan Minilik jedhamu.
* Minilik kun wanneen inni uummata Oromoo Keesaahuu Oromoo Arsii fi Oromoo Harar hiddaan dhabamsiisuuf gocha Suukaneesaa irratti godheefi ,
uummatoota: Waalayitaa, Kafichoo, Dimmee, Gimiraa fi kanneen biroo irratti
adeemsise wanneen Hitler, naazichi uummata Yuudaa irratti adeemsee gadii miti. Ammoo,
warri isaa iliitonni Amaaraa “kana irraanfadhaatii akka jagnaatti isaa
fudhadhaa” nuun jechaa jiru.
Hardha uummannii fi mootummaan Biyya Jarmanii nama waayee Hitler kaasee faarsu,
waayee isaa xiqqoo ishiillee akka gaariitti ilaalu mana seeraa geessuun
adabsiisu. Isaan “keenyaa” nama harma harmeewwan teenyaa mummure faarsaa akka
gootaatti akka fudhannuuf nu dirqisiisu! Abadan lafa irraayyi ammas nu duguugu
malee, kun dachee Oromoo irratti hin tahu!
Egaa, fiixaan-bayiinsi waayee asmaarii sanii isa Minilik faarsuu fi faabrikaa
Baddallee irratti gonfanne kun, gara qabsoo isa kana fakkaatuutti nu ceesisuu
dha qaba! Akkamitti, eessatti, maal maal faa irratti isa jedhamu kanaa gaditti
wajjumaan ilaalla. Ilaallees, humnaa fi onnee tokkoomeen wajjumaan ol-jenna!
Amma gareen warra Amaaraa kan “Garee Cuquliisaa – Blue Party” jedhamu, duula
hamaa Afaan Oromoo irratti banee jira. “Engineer Gizachew of Blue Party said,
“Afaan Oromoo was a rural language and will stay as such and it will never able
to get modernised therefore we are forced to keep using Geez”/ obboo Bariisoo
Yaa Oromoo koo, yaa saba Gadaa namtichi kun kana
jechuun duula fi waraana: Afaan Oromoo, uummata Oromoo fi saba Oromoo irratti
ifumatti kan labse Shaggar, handhuura Oromiyaa, qeyee jagnicha Oromoo qeyee
Tufaa Munaa keessatti. Ee, Shaggar dachee Oromoo Kurnan Gullallee isaan erga
qawwee ibiddaatiin, waraanaa Minilikiin moyamanii, isaan dhuumatii irraa hafan
qawween buqqifamanii, quwween oofamanii naannoo Arsiitti hariyamanii saniitti.
Wanni kun Oromoota bakka jiran maratti, alaa-manaa ilkaan ciniinnachisetoo kan
isaan tokkoomsuun olkaasu tahuu qaba! Dabrees, Gareen Cuquliisaa kun biyyattis,
biyyoota alaattis oggaa walgayii isaan waamame banu: dursee sirba Minilik
faashisticha faarsu tokko dhageessisuuni.
Raaji Waaqa, safuu namaa nuti afaan isaanii, afaan qawween nutti dhufuun
marcuma afaan keenyaa qabate kana baranna! Isaan garuu afaan keenya irratti,
biyyuma keenya irratti duula banaa jiru. Kanaafuu, tarkaanfiiwwan lama gara
Warri eeboo fi fardaan cabseetoo biyya keenya seene, gocha hamaa fi hammeenyaa
inni adeemsise keessaa inni tokko isa Afaan Oromoo irratti tahe. Hamma yeroo
dhiyoo, bara 1991-tti Afaan Oromoo akka bakka balaqqeessa tahe kan akka:
yaa’ii, paarlamaa, bataskaanaa, mana barumsaa, mana seeraa fi waajjirootatti
ittiin hin hojjatamneef seeraan dhoowwamee ture. Gaazexoonni, kitaabeewwanii fi
barrooleen marti isaan baafamuun dhoorkaa ture.
Kan biraa hafee Barroo
Qulqulluu kan biyyoota Oroppaatti afaan keenyaan barreeffamanii dhoksaan karaa
Sudaanii fi Keeniyaa faa biyya seenan guursisuun, mootummaan Habashaa inni
Kiristaana ofiin jedhu gubsiisee jira. Kana bira kutee olola jibbaa fi
jibbisiisaa afaan Biyya Gadaa kana irratti oofsisaa ture.
Garuu, kun cufti fiixaan isaaf bawuu hin dandeenye. Afaan qawwee, Afaan Amaaraa
bakka maraa fi akka maraatti iddoo Afaan Oromoo buufamuuf humnii fi horoon
irratti dhangalawullee afaan isaa kun boongoowwan isaa, jechuun magaalaawwan
bira dabruun gandeen Oromoo hulluuqee seenuu hin dandeenye. Sirumaa Afaan
Oromoo keenya dhiibbaa gurmee wayii malee, babaldhachaa, guddachaa kunoo
Dhaloota Qubee daggala-raasaa fi gabrumfataa hollachiisaa dhaqqabee jira.
*Afaan Oromoo biyyoota Gaafa Afrikaa sadii keessatti akka afaan dhalootaatti
(afaan haadhaa-abbaatti) dubbatama. Kunis: Impaayera Toopphiyaa, Biyya Keeniyaa
fi Somaliyaa Kibbaa keessatti. Baddaa Raayyaa, hara Ashangee irraa hamma Maanya
Hindiitti (“Indian Ocean“-tti), Muggii fi Beegii duubaan daangaa Sudaan irraa
hamma Magaalaa Jijjigaa cinaatti dubbatama. Akka afaan dhalootaatti uummata
kitila 46-tu, akka afaan lammaffaa yookaan sadaffaatti immoo uummata kitila
12-tu, walumatti uummata kitila 58-tu isaan dhimma-baya.
Ardii Afrikaa keessatti akka afaan dhalootaatti Afaan Arabaa fi Afaan Hawusaatti aanee
sadarkaa 3-ffaa irratti argama.
Afaan Oromoo afaan daran sooressa tahee fi afaan hedduu, hedduu miidhagina
isaatiin raajeffatamu. Heddumminni jechoota isaa, bareedumni afaanii yaa’inni
sagalee isaa kan nama maalalu. Akkuman walooloo kiyya tokko keessatti ibsuuf
yaale, inni “afaan nadhii dammaa” ti. Kan biraa hafee, waggaalee 130 seeraan
dhoowwameeyyuu, hardha hanqina jechoota ammayyaa kan afaanota Addunyaa Sadaffaa
hunda keessatti argamu sanillee karaa qabachiifatee jira. Oromoonni hundi
alaa-manaa, fiixaan-baanee jirra jechuun otoo haara wayiituu hin baafatin
dagaaginaa fi misooma afaan keenyaa irratti hojjachuu qabna!
* WANNEEN HOJIIRRA OOLUU QABAN
Egaa amma, waraana fi duula ginni-bittee Amaaraa fi mummiyyeewwan Amaaraa afaan
keenya irratti banan kana ofirraa faccisuuf, maal maal faa gochuun akka nu
irraa eegamanin armaan gaditti baldhinaan tarreessa. Baldhinaanis jala-harriqa.
1) Oromiyaa keessatti afaan biyyaa Afaan Oromoo tahuu eenyumtuu beekuu qaba.
Ijoolleen Oromoo manneen barumsaa kam keessattuu, yoo mabbawwanii
(unibasiitotaa) fi kolleejota Afaan Ingiliziitiin barsiisan tahe malee, afaan
ofiitiin barachuu qabdi. Ammaan tana ijoolleen Oromoo afaan qawween nutti
dhufee qawweenis nutti fe’ame kana, Afaan Amaaraa wanni barattuuf sababni
wayiitu hin jiru.
Gayeen gayee dhaa afaan qawwee kun nu irraayyis, marcuma
Afaan Oromoo irraayyis bu’uu qaba! San bira dabreeyyuu namoonni Oromiyaa keessa
akkaa waaraatti jiraatan afaan biyya keessa jiraatanii kana, Afaan Oromoo
barachuutu isaan baasa. Kun mee seera biyyoota addunyaatii! San irratti
ijoollee Amaaraas tahee, kan warreen biroo bakka tuuta-tuutaan jiraatanitti
afaan ofiitiinis barachuun seeruma. Kana irratti warri amma “Oromiyaa nutu
bulchaa jira” nuun jedhan, warri OPDO miila isaanii lamaanin dhaabachuun isa
jedhame kana hojii irra oolchuutu isaan baasa.
Jalakaattummaan Afaan Alaagaas,
jalakaattummaan warra Wayyaanees inni isaan adeemsisaa jiran kun eessumaanuu
isaan hin gawu! Uummata isaanii, uummata Oromoo galaana Abbayyaa kana gaachana
taasifachuun oljechuu qabu!
Yaa Oromticha, yaa Oromtittii, yaa qeerransoota Qubee dhageessuu! Gayeen gayee
dhaa, amma irraa kaasee Oromiyaa guutuu keessatti ennaa barsiisaan Afaan
Amaaraa isin barsiisu, yookaan inni wanneen biroo Afaaan Amaaratiin isin
barsiisu olseenu isinimmoo akkuma jirtaniitti kutaa sana gadhiisuun gadi-baatu!
Hubaddhaa kun seenaa keenya keessatti bara 1969 keessa dachee Oromoo Afran
Qalloo irratti magaalaa Dirre Dhaawaatti tahee ture! Bara Dargii, ee bara
mootummaan Habashaa ilmoo namaa qalee karaa irratti darbatu san dachee Oromoo
Sadan Liiban magaalaa Amboo fi magaalaa Walisootti tahee ture! Bara dukkanaa
san keessa kan ijoolleen Oromoo sun hojii raajeffatamaa kana goote, isin hardha
bara ifaa, bardhibbee 21-ffaa keessa gochuu hin daddhabdani! Oromoonni addunyaa
tana mara keessatti argaman hundumtuu karaa hundumaan isin cinaa jiruwoo!
2) Dira Shaggar keessattis Afaan Oromoo Afaan Amaaraa cinaatti afaan
ballaqqeessa (“official language“) tahuu qaba. Ijoolleen Shaggar akkuma
ijoollee dira Biruusel isa magaalmataa Biyya Beeljigii sanaa afaan lamaan kutaa
tokkoffaa irraa kaasanii Afaan Oromoo fi Afaan Amaaratiin barachuu dha qabu!
3) Oromiyaa guutuu keessatti Afaan Amaaraa afaan balaqqeessaa tahuun isaa
hatattamaan dhaabachuu qaba! Horoo fi horiin: bunni, sabbuu, diggaa fi
hoomishinni warshaalee Oromiyaa keessaa isaan amma Afaan Amaaratii oolaa jiran
dhaabachuun, Afaan Oromootiif ooluu qabu! Waajjiroonni mootummaa Toopphiyaa
isaan Oromiyaa keessatti argaman Afaan Oromootiin hojjachuun dirqama!
4) Manneen amantii hundumtuu Biyya Oromoo keessa jiran Afaan Oromootiin
hojjachuu, Afaan Oromootiin uummata tajaajiluutu isaan irraa eegama. Oromiyaa
keessatti yoo isaan kana gochuu baatan, Waaqa tokkichaa fi guddicha san akka
rifachiisan beekuu qabu!
5) Namoonni Biyya Habashaa irraa dhufuun manneen daldalaa fi seedataa banatan
Afaan Oromootiin hojjachuu qabu. Oromtichi tokko, Oromtittiin takka Oromiyaa
keessatti: gabaattis, manneen bunaatti, manneen nyaataa fayittis afaan ofiitiin
tajaajilamuu qaba, qabdi! Yoo kun tahuu baate Oromoonni warreen kana irraa waa
bituu fi waa itti-gurguruu, akkanuma irraa bitatanii dhuguu fi nyaachuu dhaabuu
6) Oromiyaa mara keessatti nama uummata Oromoo fi saba Oromoo arrabsu irraa waa
bituu fi waa itti-gurguruun dhaabachuu qaba! Nama akkanaa kanatti dubbachuun,
gaafa rakkoon itti-dhufte hamma inni ifumatti dhiifama hin gaafatinitti isaaf
birmachuun hin jiru.
7) “Gareen Cuquliisaa” inni amma Afaan Oromoo irratti waraana fi duula bane
kun, hatattamaan uummataa fi saba Oromoo dhiifama gaafachuu qaba. Tahuu
baannan, gareen kun dachee Oromoo irratti, wiirtuu Oromiyaa dira Shaggar irratti
hojii isaa adeemsisuu hin qabu!
<img>Namnoonni Amaaraa isaan
Oromiyaa keessatti gaazexoota faa baasuun: “Gaallaa Gadaay” isaanii oofaa jiran
ifumatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabu! Tahuu baannan, jarreen kun
dachee Oromoo irratti, wiirtuu Oromiyaa dira Shaggar irratti hojii isaanii
adeemsisuu hin qabani!
9) Oromoonni Oromiyaa keessatti bakka kamittuu afaan ofiitiin dhimma-bawuu
qabu. Ijoolleen Oromoo warri miseensota Dhaloota Qubee tahan, namoota alagaa
isaan Afaan Oromoo barachuu barbaadan tolumaan barsiisuu qabu. Warri OPDO immoo
bakka itti-baratamuu fi wanneen ittiin-baratamu ijoollee tanaaf dhiyeessuun
dirqama! Warri OPDO kun faajjii Afaan Oromoo olqabanii akka tarkaanfataniif,
karaa garagaraatiin dhiibbaan adeemsifamuutu karaa qajeelaa taha.
Yaa Oromoo yaa uummata koo, nuti Oromoonni aadaa fi duudhaa uummata keenyaa
irraanfachuu hin qabnu. Namni kamuu, Amaarris, Tigreenis eenyu fi eenyu faa marti
nagaa fi kabajaan nutti dhufnaan akkuma aadaa keenyaa boonsisaa saniitti
simanna! Isa afaanii fi billaa qaratee nutti dhufu guruu, tokkummaan dura
dhaabanneetoo ofirraa deebifna! Uummanni Habashaa: warri Amaaraas, warri
Tigrees uummata ollaa keenyaa waan tahaniif nageenya fi ollummaan isaan waliin
qabnu kana ololli warra Garee Cuuqulisaa fi kan warreen faarsituu Minilik
naazichaa faa booressuu hin qabu.
Faashisota Amaaraa isaan kaleessa fi isaan
hardhaatii obsa tokkollee horachuu hin qabnu! Ammoo, baaqaa-callaa
addaan-baafachuun aadaa Oromooti. Ilaa gayeen gayee dhaa, fashistoonni fi
sanyiitti-amantoonni Habashaa nurraa bu’uu qabu! Mirgaa fi haqa uumamaan
qabnuuf sochowuun, bilisummaa fi walabummaa keenyaaf tarkaanfachuun mirgaa fi
haqa uummata Habashaa: kan warra Amaaraas, kan warra Tigreess kan miidhu akka
hin taane, eenyumtuu beekuu qaba!
Akkuma mammaaksi Oromoo tokko: “abbaan iyyu malee, ollaan namaa hin birmatu”
jedhu san, nuti karaa maraan of ijaarree, karaa maraan hidhannee yoo kaane
malee, kan nuuf maluu hin jiru. “Ilma yartuu haatiyyuu hin jaalattu” jedha
Oromoon. Kanaaf, nuti hundumtuu:-
Previous BUQQIFAMA OROMOOTA SHAGGARII fi NAANNOO ISAA – Kutaa Afraffaa
Next The fate of the Oromo under the rising Amhara racism